amụma nzuzo | data Recovery
Home → amụma nzuzo
Anyị data mgbake lab na-a nchebe gburugburu ebe obibi na ihe niile ahịa data nọ onwe na-achịkwa laabu ohere iji hụ na kwesịrị ekwesị ọkachamara aka mwute ozi. Anyị na-ahụ mgbe nile butere okûnam nkewa data maka ọchịchị, mmanye iwu ụlọ ọrụ na nzuzo na òtù. LC Technology na-agba nkịtị na-na ọkwa nke nzuzo na nchebe na nkewa ihe achọ. All natara akwụkwọ na-na-adịgide adịgide kpochapụrụ mgbe 30 ụbọchị.
nzube: LC Technology International nzuzo iwu kwuru na e dere dị ka a na ndu ka ozi anyị nakọtara site na ọrụ na otú anyị na-eji ozi ahụ. Anyị na-eche na nke a ga-ekwe ka ha mee ka onye gụrụ akwụkwọ na ala mkpebi ọkọnọ ozi anyị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla kwuru ma ọ bụ na-akpata nchegbu na-amasị ka anyị mara na Service@LC-Tech.com.
na ọnụ ọgụgụ Ndepụta
Omume igwe mmadụ na ozi gbasara onwe anyị arịrịọ
Olee otú anyị na-eji anakọtara ozi
Onye anyị na-ekekọrịta ozi
Statistics Ndepụta: LC Technology na-arụ ọrụ 4 Sites n'aka, www.LC-Tech.com, www.LC-Tech.co.uk, www.FILERECOVERY.com na www.PHOTORECOVERY.us All saịtị soro ọnụ ọgụgụ. Saịtị anyị jiri nchịkọta nsuso ọrụ ndị dị ka Google Analytics na Bing Analytics.
Ọrụ ndị a n'ịwa ọnụ ọgụgụ anyị dị ka peeji nke anya, ogologo oge ole na ha na-ele ya anya, nnọkọ oge na ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ. Nke a na-eji ozi internally naanị jikwaa ọrụ ahụmahụ mma.
Anyị na-adịghị na-ebipụta ma ọ bụ na agbanyeghị ka anyị ọnụ ọgụgụ ọha.
anyị nwere ike, na oge ndepụta otú ọtụtụ ndị ọbịa ma ọ bụ akụrisị anyị ebe edozi na a nyere oge, ma ọ dịghị kpọmkwem ozi na onye IP adreesị a tọhapụrụ. Nke a na-eji maka na mpaghara Demographics naanị na a na-adịghị ịchekwa, ma ọ bụ na-akọrọ.
Anyị na-adịghị ere anyị data onye ọ bụla — ọ na-na-eji internally.
kuki: Anyị na-eji kuki ke e-azụmahịa nke ebe anyị na saịtị. Kuki na-eji na-esochi nke ahịa ụgbọ ọdịnaya na-azụ ahịa nnọkọ. Kuki na-eji na enyemaka rijuru afọ na forms na-akpaghị aka. Kuki na izipu ozi ọ bụla na-ekubi ume na a ụbọchị ole na ole.
Omume igwe mmadụ Ozi na Personal Information Anyị Arịrịọ: Anyị na-arịọ onwe na ọtụtụ ebe ndị anyị na website; mgbe demos ndị ebudatara, ozi rịọrọ, ngwaahịa na-zụrụ, oru nkwado na-arịọ ma ọ bụ na a na ndenye aha na anyị ala na-rịọrọ. Yana nkeonwe, anyị na-arịọ na isi omume igwe mmadụ ozi na / ma ọ bụ a nkọwa nke nsogbu ị na-enwe. All nzipu ozi anatara bụ ọpụpụ-na na onye ọrụ nwere ike wepu aha na oge obula site n'izite ihe e-Mail na Unsubscribe@LC-Tech.com na-ozugbo wepụrụ.
Anyị Jiri anakọtara Ozi: Ozi ọ bụla anakọtara na anyị website, ma osụk site ọrụ ma ọ bụ anakọtara site ọnụ ọgụgụ nkesa na-eji nditịm na-ụlọ maka omume igwe mmadụ analysis, ngwaahịa mma na enwekwukwa ọrụ ahụmahụ. Anyị na-eme nwere a kwa ọnwa ala nke bụ ọpụpụ-na site e-Mail. Anyị na-eme abụghị spam ma ọ bụ nnukwu e-Mail na-enye ma ọ bụ mgbasa ozi ma ọ bụ na-eme anyị na-ere ma ọ bụ kesaa anyị ndepụta ọ bụla ọzọ mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Anyị na-niile ozi nditịm nzuzo.
Ònye Anyị ji Ekekọrịta Ozi Na: The naanị ndị ọzọ nwere ihe ọ bụla na ịnweta ozi banyere ahịa anyị bụ First Data Corporation site na ha E4 Global Gateway kaadị nhazi ụzọ ámá, tinyere PayPal, Straipu na SanDisk® Corporation. Ozi e zigara E4 Global Gateway, PayPal ma ọ bụ straipu naanị mgbe a ahịa na-eme ka a zụọ na anyị na-eji a ala azụmahịa ụzọ ámá. First Data Corporation (E4 Global Gateway si Parent Company) bụ otu n'ime ndị kasị ibu kaadị processors na ụwa na-arụ ọrụ na 34 mba gburugburu ụwa. Ị nwere ike ịlele ozi ha Ebe a. First Data ka okwu ọjọọ kwupụtara ha adịghị ekere òkè ọmụma na na ọ bụ megide kaadị issuers iwu, nke na-adịghị ekwe ka ha nwere nke ọ bụla ịgba ụgwọ ozi. LC Technology ike kwado ọ bụla iwu site E4 Global Gateway ma ọ bụ First Data. Ozi e zigara SanDisk® Corporation naanị mgbe a ahịa zụrụ SanDisk® RescuePRO® kpọmkwem site www.LC-Tech.com. SanDisk® Corporation bụ otu n'ime ndị kasị ibu na-emepụta na suppliers nke flash nchekwa kaadị ngwaahịa maka a dịgasị iche iche nke na kọmputa na ngwaahịa na dijitalụ ngwaọrụ. LC Technology International ike kwado ọ bụla iwu site SanDisk® Corporation.
Gịnị Rights I N'ime gị Data:
Ọ bụrụ na ị bụ òjìarụ ọrụ ma ọ bụ nwere ekpe comments na anyị na saịtị i nwere ike ịrịọ ka ịhụ ma ọ bụ download data anyị nwere banyere gị. Ka LC-Tech.com anaghị comments, ma ọ bụ nwere edebanyere ọrụ, anyị ga-enweghị ọmụma nke a ụdị maka a esenowo ka download. The naanị ọmụma anyị ga-ga-abụ ihe ọmụma ọnọ si dejupụta a software nwale arịrịọ ụdị, a arịrịọ nkwado ụdị, ma ọ bụ a na kọntaktị ụdị.
A ọbịa na-dejupụtara a ụdị, na data ga-ha email address, ọ bụla adreesị IP kenyere ha na oge nke dejupụta a n'ụdị na onye ọrụ gị n'ụlọnga ndido urụk nke nchọgharị na ha na-eji. The ike nke data bụ ọha dị ka bipụtara ọbịa.
Na-akwụ ụgwọ ndị ahịa, a ga-agụnye ozi profaịlụ na download, ugwo, na nkwado tiketi akụkọ.
*** I nwekwara ike na-arịọ "ka e chefuo" na anyị ga-akwụsị ihe ọ bụla idemesie amata data anyị nwere banyere gị.
N'ezie, a Ewezuga data dị anyị mkpa maka nhazi ma ọ bụ ebumnuche nche ma ọ bụ ma ọ bụrụ na anyị na-achọrọ site na iwu na-ejigide ụfọdụ nke data.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-a na-akwụ ụgwọ ahịa nke anyị, na nwere a software ikike nke e ịdenyere aha na anyị, ma ọ bụrụ na anyị na-ihichapụ ị anyị database, anyị ga-enwe ike iji anya gị elu anyị database na-enwe ike inyere gị aka a oru nkwado, ikike ọhụrụ, ma ọ bụ ndị ọzọ okwu. Ya mere, biko na-atụle na mgbe ị na-arịọ nhichapụ anyị database.
N'ihi na ugbu a oge, nke a metụtara anyị na ndị ọbịa si European Union, na dị na General Data Protection Regulation (GDPR).
Ọzọkwa, dị ka nke January 1, 2020, a ga-emetụta na ọhụrụ tiri California Consumer Nzuzo Act.
Anyị ga megharịa a n'ihu na n'ọdịnihu dị nso.
Otu onye na-achọ ohere, ma ọ bụ onye na-achọ ka ọ gbazie, megharịa, ma ọ bụ hichapụ etịbe data, ikpodude / ya ajụjụ ka support@lc-tech.com.
Anyị ga-azaghachi n'ime a ezi uche timeframe, not to exceed one week.
N'ihi na ugbu a oge, nke a metụtara anyị na ndị ọbịa si European Union, na dị na General Data Protection Regulation (GDPR), na dị ka nke January 1, 2020, kwa California bi persuant na California Consumer Nzuzo Act.
Gịnị Data iro usoro anyị nwere na Place:
Ga bụla editịbe ebe ahịa data e efu, zuru, ma ọ bụ nwere ike mie ala, anyị iwu bụ ịgwa ndị ahịa anyị site na email dịghị mgbe e mesịrị ka 48 awa nke anyị otu na-aghọ maara nke ihe omume. Anyị ga-akọ dị otú ahụ merenụ ọ bụla chọrọ data nchedo ikike. Anyị ga na-arụ ọrụ anya na ọ bụla ahịa emetụta ikpebi ọzọ nzọụkwụ dị ka ọ bụla end-ọrụ Ịma Ọkwa, na otú zere ihe ọ bụla yiri ihe omume na-eme n'ọdịnihu.
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa – Service@LC-Tech.com
kagbuo ndenye aha – Unsubscribe@LC-Tech.com
ekwentị Anyị – Toll Free (866) 603-2195
FirstData Kpọtụrụ – Pịa ebe a